MASAAJIDDA & CORONAVIRUS (COVID-19) - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada MASAAJIDDA & CORONAVIRUS (COVID-19)
MASAAJIDDA & CORONAVIRUS (COVID-19)
Muqdisho (walwaal online), Labada oday ee Xasaan iyo Umal ayaa ka hadlay arrinta Corona iyo masaajidada la yidhi hala xidho, midba dhinac ayuu ula dhaqaaqay.
Waxaase muuqata khatarta cudurkan in aanay warba ka hayn.
1. Xasaan wuxuu la aaday arrin bulshada oo dhan u nugushahay oo ah mu’aamarad iyo waa arrin la doonayo in masjidyada lagu xidho, qaabkaa Xasaan uga hadlay waa qaab khatar ah oo bulshada caafimaadkeeda khatar gelinaysa, waana qaab khatar weyn ka imaan karto.
Ugu horayn Masjidka duruufaha lagu xidhayaa waa kuwo ay dantu khasabtay oo keentay gurigii ilaahay ee adduunka ugu ajarka badnaa lagu xidhay waa Masjid Alxaramkee iyo dhammaan goobaha kale ee ka fadliga badan Masjid ku yaala Islii ,sidaasi daraadeed cid xilligan masaajido la xidho dan kalihi ma jirto aan ka ahayn Khatarta soo socota oo diinteenta Islaamku ina farayso in dadka la badbaadiyo, dhammaan wuxuu soo daliishaday Xasaana waa marduudun calayhi.
Waxa kale oo uu sheegay Xasaan in ay u baahan yihiin uun qalabka lagu eego qandhada oo markaas ka dib aanay wax kale u baahnayn. Qalabkaas wuxuu sheegaa oo kaliya marka uu qofku qandho xun qabo, laakiin cudurkan waxaa faafiya qof aanu wali soo ridan oo Caafimaad ka muuqdo, dawlado badan oo Bariga dhexe ah dadka sida Xasaan oo kale u hadlay Xabsigay u taxaabeen ee fududeynaya talaabooyinka looga hortagayo cudurkan.
2. Umal iyo raggii la afkaarta ahaa inkasta oo ay Xasaan ka sakeeyeen hadana waxay u eekaayeen rag khatar gelin kara dadaalka loogu jiro xakamaynta cudurkan sida ba’an u faafaya.
Dhawr dal ayaa sahashaday maantana way ka shanlaynayaan, Talyaaniga iyo Kuuriyada Koonfureed, Talyaaniga siyaasiyiin badan ayaa fududeeyey halista cudurkan markii dadkii Tarab Tarab u daateena raali gelin ka bixiyey.
Kuuriyada Koonfureed waxaa inta badan faafiyey dadka isugu taga goobaha cibaabada, waxaana aad u faafiyey koox xagjir ah oo MAD-hab kiristaana haysta oo diiday in ay joojiyaan kulamada qarsoon iyo maalmaha ay cibaadada isugu yimaadaan, waxaana Kuuriyada Koonfureed ku faafisay hal haweena oo kooxdaa ka tirsanayd oo booqatay magaalada Wahen ee Shiinaha.
Arrinta hawshan ugu muhiimsan ee looga hortagi karaa waxay tahay in loo hoggaamsamo warka ka soo baxa wasaaradaha caafimaadka iyo hay’adaha arrimahan ku hawlan.
Dad badan ayaa cuduradan sahashanaya kuna dayan kara dawlado iyo bulshooyin awood u leh arrimaha qaarkood walibana halis ku jira , sida Indunuusiya oo Masaajidada qaab dadka lagu kala fogaynayo u tukanaya xataa kuwaasi khatar ayey ku jiraan.
Qaabka arrinkan looga gudbi karo ayaa ah in Asbaabta la qaato ilaahayna lagu xidhnaado, lana baryo in uu culayska ka dulqaado bulshada Adduunka oo dhan ee looba baahana shaki in la abuuro iyo masjidyo ayaa loo ham iyo degleeyahay, waa Cantariyaad.
Cumar Ibnu Khaddaab (RC) wuxuu yidhi isaga oo Shaam ku socda oo Daacuun ka dilaacay , inta uu saxaabadii weydiiyey xaaladan oo kale yaa ka war haya waxa rasuul (SCW) ka yidhi oo saxaabi u sheegay in uu maqlay rasuulku in uu yidhi meel cudur faafayaa ka dhaco yaan la gelin lagana bixin oo Cumar saxaabadii safarkii ka hakiyey oo nin saxaabi ahi soo booday oo ku yidhi Cumarow ma qadarta ilaahay ayaad ka cararaysaa.
Cumar Ibnu Alkhaddaab wuxuu ku jawaabay weedh Xasaan ka maqan iyo qof kasta marka arrimahani dhacaan, “Qadarta ilaahay ayaanu ka cararaynaa, Qadarta ilaahayna waanu u cararaynaa.
Waxaa qoray: Asad Cadani
Previous articleWAXAA HARGEYSA KA DEGTAY DIYAARADII MUQDISHO
Next articleMA CADEE HA CADEEYO
SOOMAALIYA OO WAR KA SOO SAARTAY QAADKA KENYA